Indlu encinci yaseGreenbrier
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCarter
Indlu yethu enegumbi elinye enokufikelela emlanjeni ihleli kumakhulu ambalwa eemitha ngaphezulu koMlambo iGreenbrier, inobumfihlo obuninzi. Ibhedi ye-Queen, i-sofa yokutsala enebhedi ephindwe kabini, itafile kunye nezitulo, i-AC. Indawo ugqibelele iihambo ukudada, ibhayisekile i Greenbrier River Trail, kunye nokuhamba --10 imizuzu ukusuka Watoga State Park iindlela kunye nokuloba; Imizuzu eyi-15 ukusuka kwiCranberry Glades; iyure ukusuka eLewisburg, WV -- ivotele eyona dolophu ipholileyo eMelika kwiminyaka embalwa edlulileyo. Indlela yethu yokuqhuba iphambi komlambo kodwa hayi indlwana ngokwayo.
Indlwana yethu idibanisa ukufikelela kuMlambo iGreenbrier entle yokubheqa, ukuqubha, ukuloba, kunye nokudada, kunye nobumfihlo, imfihlo kunye nokuzola. Ukufikelela kumbindi we-80-mile ye-Greenbrier River Trail, ngokunyuka intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile, kukufutshane. I-River Trail ikwelinye icala lomlambo kodwa ineendawo zokufikelela kwiikhilomitha ezimbalwa emantla okanye emazantsi ethu.
Ummandla ulungile kwiintaka, iintyatyambo zasendle kunye namakhowa eWatoga State Park kunye neCranberry.
ICass Scenic Railroad, iSnowshoe kunye neGreenbank Observatory zimalunga neyure emantla.
I-cottage ikwi-Pocahontas County, "indawo yokudlala yendalo" kunye "nendawo yokuzalwa kwemilambo."
Iphenyane, ityhubhu kunye nebhayisekile ezirentwayo ziyafumaneka eSeebert (iikhilomitha ezi-4 emazantsi) naseMarlinton (iikhilomitha ezi-6 emantla).
Iindawo zokutyela eSeebert, eMarlinton, eHillsboro (iikhilomitha ezi-5 emazantsi), iSlaty Fork (malunga nemizuzu engama-40 emantla), eSnowshoe (malunga neyure emantla) naseLewisburg (malunga neyure emazantsi).
IiFavorite zibandakanya: Pretty Penny (Hillsboro), Fiddlehead (Snowshoe), Dirt Bean kunye neLocust Creek B&B (Marlinton), kunye neendawo zokutyela ezininzi eLewisburg.
Eyona venkile inkulu yegrosari ekufutshane yi-IGA (Marlinton), iivenkile ezincinci eHillsboro, Seebert naseBuckeye.
Umbuki zindwendwe ngu- Carter